❤ IApartment yeGarden-Stockport❤
Xa iyi-113 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Sinendawo enesitayile esikufutshane nesikhululo seenqwelomoya saseManchester kunye ne-10 mins ukusuka kwisiXeko kuloliwe. Iyinxalenye yekhaya lethu kodwa isengasese; unokufikelela ngegadi kwaye indawo yonke ikumgangatho ophantsi. Sisanda kulungisa ipropathi yonke ukuze indawo ihonjiswe kuyo yonke indawo ngegumbi lokuhlambela elitsha elitofotofo kunye nekhitshi ephuculweyo. Unokusebenzisa igadi engasemva ejonge emazantsi eneendawo ezintathu zokuphumla kunye okanye ukonwabisa.
Indawo yethu yokuhlala yahlukile; ayisiyiyo eyona inomtsalane ngokwezakhiwo kodwa ngokuqinisekileyo iyakhohlisa. Ndingathanda ukucinga ukuba ukuza kuthi ga ngoku senze uninzi lwalo, ndiyayithanda ipropathi kunye nokuhlaziya kwaye ndingumntu okhutheleyo we-DIY othanda ukugqibelela, kakhulu ukuphoxeka komfazi wam.
I-wifi ekhawulezayo – i-113 Mbps
43" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix, I-Apple TV
4.92 out of 5 stars from 414 reviews
4.92 · Izimvo eziyi-414
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi414
Indawo yethu ibekwe ngaphakathi kweHeaton indawo enamagqabi adumileyo eManchester. Ifakwe kwimizuzu embalwa ye-junction 1 ye-M60 ye-Airport ye-10 mins, i-Man United 18 mins, i-Man City 19 mins, i-City centre 22 Mins, i-Stockport Train station 7 mins. Sinokhetho oluhle lwee-pubs, iibha, iikhefi, icinema kunye neevenkile zonke ngaphakathi kohambo lwe-12/20 min. Ukhetho oluninzi lwezothutho zikawonke-wonke, iiTram, oololiwe kunye neebhasi zonke zinokuhamba.
Ndikhona kwaye ndifumaneka ngesaziso esifutshane kakhulu ukuba ufuna nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho. Ndizakuhlangana ndikubulise xa ufika ukuba ungandazisa ixesha lakho eliqikelelweyo.
Ngexesha lokuhlala kwakho sikhona kwaye siphezulu ukuba kukho into oyifunayo.
Ndikhona kwaye ndifumaneka ngesaziso esifutshane kakhulu ukuba ufuna nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho. Ndizakuhlangana ndikubulise xa ufika ukuba ungandazisa ixesha lakho eliqi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Stockport